Kitra – «Can 2019»: tonga, omaly tany Egypta ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: tonga, omaly tany Egypta ny Barea de Madagascar
Par Taratra sur 20/06/2019
Anisan’ireo ekipa voalohany, tonga any Egypta ny Barea de Madagascar. Salama avokoa ireo mpilalao ary vonona hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, ry zalahy.
Omaly alarobia maraina, no nigadona tao amin’ny seranam-piaramanidina ao Le Caire, Egypta, ny Barea de Madagascar, hanao ny “Can 2019”. Nitsena ny delegasiona malagasy, teo am-pahatongavana ireo Malagasy, monina any an-toerana. Avy hatrany dia nandray ny fiarabe efa voatokana ho azy, mandritra ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ity, ireo mpilalao 23 mirahalahy sy ny ekipa teknika rehetra, ka nihazo an’i Alexandrie, toerana hanatanterahina, ireo lalaom-bondrona.
Voalazan’ny vaovao, fa ambony ny moralin’ny mpilalao, na teo aza ny fialan’i Bertrand Dupuis, mpanazatra ara-batana, izay tsy nampoizin’ny rehetra. Salama ara-batana tsara daholo ihany koa ry zalahy.
Ankoatra izay, mandalo fotoan-tsarotra ny Syli National-n’i Ginea, ekipa hifandona amin’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny lalao voalohany, ho an’ny vondrona “B”. Fantatra mantsy fa tsy naratra ary nanao veloma ny “Can 2019”, i Baissama Sankoh, andrin’ny fiarovantenan’ity ekipam-pirenen’i Ginea, ity. Vokatr’izay, voatery niantso an’i Alhassane Bangoura, i Paul Put, mpanazatra. Na eo aza izany, feno ahiahy ny Syli National, noho izay fahabangana eo amin’ny vodilaharana izay.
Raha tsiahivina, ny asabotsy 22 jona, amin’ny 11 ora alina eto Madagasikara, no hikatroka ny ekipa roa tonta.
Tsy hilalao ihany koa i Mané
Vaovao ratsy ihany koa ny an’ny Liona-n’i Teranga avy any Senegal satria tsy afaka ny hiatrika ny lalao voalohany, hikatrohany amin’i Tanzania, ny alahady 23 jona, ho avy izao, i Sadio Mané. Vokatry ny karatra mavo roa azony, nandritra ny fifanintsanana, izao tsy fahazoany miakatra kianja izao.
Na eo aza izany, nanambara i Alliou Cissé, mpanazatra fa tsy manakorontana ny liona-n’i Teranga, izany tsy fahazoany mialalao izany.
Marihina fa anisan’ny lohalaharana, ianteheran-dry zareo Senegaley, i Mané, amin’ity «Can 2019 » ity. Mané, izay vao avy nandrombaka ny «ligue des champions d’Europe», niaraka tamin’ny Liverpool.